Ingabe Kufanele Ubuye Ubuyekeze Ikhasi Elibekwe Kakhulu? Inganekwane ye-SEO | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2021 Douglas Karr
Umuntu engisebenza naye wangithinta owayethumela iklayenti labo isiza esisha futhi wabuza izeluleko zami. Uthe i-an Umxhumanisi we-SEOt ebisebenza nenkampani ibeluleke ukuthi baqinisekise ukuthi amakhasi abebekleliswe ngawo awashintshwa kungenjalo bangalahlekelwa yisikhundla sabo.
Eminyakeni eyishumi edlule bengisiza eminye yemikhiqizo emikhulu emhlabeni ukuthi ifuduke, iphakame, futhi yakhe amasu wokuqukethwe afaka ukuhlelwa kwezinto eziphilayo njengesiteshi esiyinhloko samathemba nemikhombandlela. Kuzo zonke izimo, ngisize iklayenti ukuthi likhulise amakhasi asezingeni njengamanje nokuqukethwe okuhambisana nakho ngezindlela eziningi:
Ukuhlanganisa - Ngenxa yezindlela zabo zokukhiqiza okuqukethwe, amaklayenti ayevame ukuba nenqwaba yamakhasi angabekiwe kahle ayengukuqukethwe okufanayo. Ukube babenemibuzo eyisi-12 esemqoka; isibonelo, mayelana nesihloko… babhala izikhala eziyi-12 zebhulogi. Abanye babalwa kahle, iningi alizange. Ngingalakha kabusha ikhasi futhi ngililungisise ngayo yonke imibuzo esemqoka ibe yindatshana eyodwa ehlelwe kahle, ngiqondisa kabusha wonke amakhasi kuleyo ebekade ihamba phambili, ngisuse ezindala, futhi ngibuke ukukhuphuka kwekhasi kusesilinganisweni. Lokhu akuyona into engiyenzile kanye… ngikwenza ngaso sonke isikhathi kumakhasimende. Ngikwenza lapha lapha Martech Zone, Futhi!
Ukwakheka - Ngilungiselele ama-slugs wekhasi, izihloko, amagama angukhiye abhalwe isibindi, kanye namathegi agcizelelayo ngaso sonke isikhathi ukuhlela amakhasi kangcono ukuthola ulwazi lomsebenzisi oluphakeme. Ababonisi abaningi be-SEO bangakhwabanisa ngokuqondisa kabusha i-slug yekhasi elidala baye kwelisha, bethi lokho kuzoba njalo ulahlekelwe elinye lamandla alo lapho iguqulwa. Futhi, ngikwenzile lokhu kusayithi lami uqobo kaninginingi lapho kunengqondo futhi kuyasebenza ngaso sonke isikhathi lapho ngikwenze ngokukhalipha.
Okuqukethwe - Ngiziqambe kabusha izihloko zezindaba nokuqukethwe ukuze nginikeze izincazelo eziphoqayo, ezihambisana nesikhathi ezibandakanya kakhulu izivakashi. Akuvamile kakhulu ukwehlisa isibalo samagama ekhasini. Imvamisa, ngisebenza ekwandiseni isibalo samagama, ngifaka izigaba ezingeziwe, ngifaka ihluzo, futhi ngifaka ividiyo kokuqukethwe. Ngivivinya futhi ngenzise izincazelo ze-meta zamakhasi ngaso sonke isikhathi ukuzama nokushayela amanani angcono wokuchofoza kusuka kumakhasi wemiphumela yenjini yokusesha.
Emasontweni ambalwa edlule, ngabhala ukuthi ngikwenza kanjani khomba amathuba e-SEO ukuthuthukisa izinga lokusesha futhi ngasho ukuthi ngibonile umtapo wokuqukethwe njengethuba elihle lokushayela isikhundla esingeziwe. Ngiklelise i-9th endatshaneni yami.
Ngibhale kabusha ngokuphelele i-athikili, ngivuselela isihloko sendatshana, isihloko se-meta, incazelo ye-meta, ngithuthukisa i-athikili ngezeluleko nezibuyekezo ezithile ezivuselelwe. Ngibukeze wonke amakhasi womncintiswano wami ukuqinisekisa ukuthi ikhasi lami lihleleke kangcono, lisesikhathini futhi libhalwe kahle.
Umphumela? Ngisuse indatshana ku usezingeni 9th ukukala 3rd!
Umthelela walokhu kwaba ukuthi mina kuphindwe kabili ukubukwa kwekhasi esikhathini esedlule kusuka kuthrafikhi ephilayo:
Eminyakeni edlule, kuso kwaba kungenzeka kuma-algorithm wegeyimu futhi ungabhubhisa isikhundla sakho ngokwenza izinguquko kokuqukethwe kwakho okubaliwe ngoba ama-algorithms ancike kakhulu kuzimpawu zekhasi kunokuziphatha komsebenzisi.
IGoogle iyaqhubeka nokulawula ukusesha ngoba baluka lokhu ngokucophelela. Imvamisa ngitshela abantu ukuthi amakhasi azokhonjwa okuqukethwe, kepha abekwe ngokuya ngokuthandwa kwawo. Uma ukwenza kokubili, ukhuphula izinga lakho.
Ukuvumela ukwakheka, ukwakheka, noma okuqukethwe uqobo kumile kuyindlela yomlilo eqinisekile yokulahlekelwa isikhundla sakho njengamasayithi ancintisanayo athuthukisa imizwa yabasebenzisi engcono ngokuqukethwe okubandakanya kakhulu. Ama-algorithm azohlala esiya lapho kubasebenzisi bakho kanye nokuthandwa kwekhasi lakho.
Lokho kusho ukuthi kufanele uqhubeke nokusebenza kokuqukethwe nokwakhiwa kokuklama! Njengomuntu oqashelwe ukusiza amaklayenti nge-search engine optimization ngaso sonke isikhathi, ngihlala ngigxile kwikhwalithi yokuqukethwe kanye nesipiliyoni somsebenzisi kuma-algorithms.
Vele, ngifuna ukukhipha ukhaphethi obomvu kuzinjini zokusesha ezinesayithi nekhasi le-SEO imikhuba emihle… kepha ngizotshala imali kuyo ukwenza ngcono ulwazi lomsebenzisi ngaso sonke isikhathi lapho ushiye amakhasi engashintshiwe ngenxa yokwesaba noma ngokulahlekelwa isikhundla.
Ingabe Kufanele Ubuyekeze Ikhasi Elibekwe Kakhulu Emiphumeleni Yenjini Yokucinga?
Uma ungumxhumanisi we-SEO oluleka amaklayenti akho ukuthi angalokothi abuyekeze okuqukethwe kwawo asezingeni eliphakeme… Ngikholwa ukuthi uyadembesela emisebenzini yakho ukuwasiza ukuba aqhube imiphumela yebhizinisi ethuthukisiwe. Yonke inkampani kufanele igcine okuqukethwe ekhasini layo kusesikhathini, kufanelekile, kuphoqelela, futhi kunikeze ngomuzwa womsebenzisi othuthukisiwe.
Okuqukethwe okuhle okuhlanganiswe nomuzwa ophakeme womsebenzisi ngeke kukusize nje sikala kangcono, kuzophinde futhi shintsha ukuguqulwa okuningi. Lokhu kungumgomo wokugcina wokumaketha kokuqukethwe namasu we-SEO… ukungazami ukulawula ama-algorithms.
Tags: ukwenziwa kokuqukethweiqhakambisa okuqukethweokuqukethwe okuklelisiweukusebenzisa ngokugcwele injiniseoseo inganekwaneukubuyekeza okuqukethwe